1 Ọhọrọ ngalaba aha, web sunucusu, na onye na-ewu ụlọ
2 Onwe-hosted vs WordPress.com
3 WordPress ücretsiz blog eklentileri
4.2 3. Sebze Lite
4.3 2. Gıda Blog Okwu
5.2 Hindiba Ntụziaka Efrata
6 Usoro 5 dị mfe iji nweta blog uygulaması n’ala
6.1 Nzọụkwụ # 1: Chee atụmatụ blog / web sitesi
Platformu – WordPress.org
WP gburugburu (n’efu) – Dyad, Kouki, sebze
WP gburugburu (ọgwọ) – Esi nri, Yemek Blogu, Yum
WP ngwa mgbakwunye – Ntuziaka kacha mma WP, Simmer, hindiba, esie
Ara maara … ụtụtụ blọọgụ na-enweta ego 6 ụnụ ọgụgụ taa bụ ndị mmadụ dị ka gị, wuru ya, nenweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị ag-na-adịghị agwụ agwụ banyere niche ha.
Obi dịkwa m ụtọ na ị na-ewere nzọụkwụ mbụ gị taa. Ya sadece, ka anyị bido.
Ọhọrọ ngalaba aha, web sunucusu, na onye na-ewu ụlọ
Iji malite blog nri gị, en iyi şu ga-achọ bụ:
Akpa abia aha ngalaba. Naanị, aha ngalaba gụ bụ adreesị weebụ gị.
Ụtụtụ mmadụ na-akparị maka iji ‘isi okwu’ na ngalaba aha nke sadece Google gosipụtara ya n’elu maka mgbe ndị ọrụ chọwara okwu ndị ahụ.
Otú ọ dị, kenụnọ nke isiokwu ahụ na ngalaba aha agaghịzi emetụta motor motor algoritması.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ imepe blog banyosu nri paleo, ọgaghị akpọ blog gị paleofood.com. BrownbỌlagodi, aeghị enye gị ihe ọ bụla SEO brownie.
Nke ahụ kwuru, p bụ kpam kpam n’aka gị ụdị aha ngalaba ị họọrọ.
Ọzọkwa, ị ga-amatarịrị na ọ dị mma ịmalite blọọgụ nri ma jiri aha gị dị ka aha ngalaba. Yabụ, ụ bụrụ Jane Jane, ị dị mma ọkpọ blog yazarı JaneDeo.com gị.
N’ụzọ ahụ, ị ​​ga-enwe nkwụghachi dị elu n’ikpeazụ n’ihi na mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ị ga-aghọ onye ama ama gị na ama. Gibi olabilir onye impencer ike becomebụ bụrụ.
Otu nnukwu athe nke ịdị aka ahụ bụ nkwado ndị ahịa, Mkpụrụ Egwu. E nwere ike na-akpọ ya blog, "customersupportadvice.com".
Mgbe ọ họọrọ ngalaba aha, Nam iji ngalaba aha na-edeba aha ọrụ dị ka Namecheap ede ya. Ma ọ bụ, ị nwekwara ike sitezụta ya site n’aka ndị na-eweta gị ma ọ bụrụ na ha enye otu. (Ọtụtụ n’ime ha na-enyefe onwe ha n’efu na atụmatụ kwa afọ.)
Ozugbo we nweta aha ngalaba ahụ, onkwesịrị chọta onye anabatara WordPress ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị ndụ.
Enwere ve nnabata websaịtị ịh jrọ site na, na ọtụtụ n’ime ha na-abịa na nchịkọta WordPress jisiri ike. Ihe dị iche n’etiti akaụntụ nnabata WordPress İngilizce dilinde nasıl okunur.
SiteGround – Nha ntan nettet kacha mma na nkwado ezigbo ndbo ahịa.
Enwe Mmasị – Ezigbo web sunucusu, ulo nke BuildThis.io.
Ndị na-edebe weebụ ikedị ịnụ ala dịka $ 3.99 / wanwa na ụnụ ahịa dị ka $ 29 / wanwa. Enwere onwe gị malite na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere at nmatye ve ntinye ma mechaa kwụọ ụọgwọ ka okporo ụzọ gị na-eto.
Site ziyaret et ụlọ ọrụ weebụ na aha ngalaba ahụ, ihe ọzọ ị ga – achọ ịhọrọ bụ usoro ikpo okwu maka iwuli saịtị gị – ma ọ bụ onye na – arụ ọrụ na saịtị ahụ.
Daha fazla: Nhazi (lọ ọrụ nke oge a (ntụgharị, Wix Anka Nrụpụta Ihe Wix) ngalaba nchịkọta na nchịkwa n’elu ikpo okwu ọnụ.
N’ime nkuzi a, herhangi bir WordPress CMS.
Onwe-hosted vs WordPress.com
Pzọ kachasị mfe iji ghọta Worddịiche dị n’etiti bir on-hosted on a WordPress.com akaya anya na URL g URL ga-ele anya na nke ọ bụla.
WordPress.com için web sitenizi indirin. O doro anya, ejiri akara mara WordPress niile.
Daha fazla bilgi – yourfoodblog.com – Bu web sitesinden weputara onwe ya nke nwere nnwere onwe n’ezie.
WordPress.com’da bir WordPress.com’da bulunuyorsunuz:
YE bụ ONYE onye na-elekọta blogger
ON GAGH to achọ… ma ụ bụ na ị maghị banyere ịmebi ịntanetị
Chọgh bany ịma banyere njimara nke gị
Sen daha fazla bilgi edemezsin mmachi dị iche iche dịka enweghị nkwado maka plugins na ndị ọzọ
Notchere ere mgbasa ozi na saịtị gị (ịbụlagodi ọ bụghị ruo mgbe ị ghọrọ weebụsaịtị okporo ụzọ dị elu)
P bụrụ na nke ahụ abụghị, gaa maka websaịta WordPress kwadoro. Ime nke a ga – en irere ị nir uru nke ọtụtụ puku isiokwu WordPress na eklentileri
Dịla ugbu bir ịmalite ịmalite blog gị. Maka nke a, ị ga-achọ isiokwu na eklentileri ole na ole.
WordPress ücretsiz blog eklentileri
Ebe ụ bụ na ị na-amalite na blọọgụ gị, yana maka na ọ ga-adị oge tupu ọ malite iwere gw ego, ọ dị mma ịmalite iji isiokwu n’efu.
Ücretsiz bir WordPress nri n’isiokwu ị nwere ike ọhọrọ site na:
Kouki b maka gị ma ọ bụrụ na ị hụrụ ebe ọcha n’anya ma chọọ ntinye zen na ntakịrị. Kouki na-eji nnukwu yazı tipi na-egosipụta ihe ngosi dị nnọọ mma. Club ya na otu n’ime ntinye ihe ntanetị ndị a na-emepụta (a tụrụ aro n’okpuru ebe a), ị ga-adịkwa njikere iji ndụ gị na-ebi ndụ.
3. Sebze Lite
Ngosi & nkọwa / ụnụ: 129 $
Cook’d Pro bio is WordPress yazarı WordPress mara nma dị oke egwu na ngwaọrụ niile. Dịka ị pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo dị n’elu, ọ na-elekwasị anya na foto.
Ọzọkwa, na-ewu ya na ntọala Jenesis, nke a maara na ag na-agba ọsọ na ọkụ. It mkpuchi nke usoro a na-abịa na ngalaba dị iche iche maka ntọala SEO yana maka ntọala ndị ọzọ.
Kwa Ụbọchị bụ isiokwu ọzọ nke Jenesis ị ga-elele. Site nkwụsi ike na ọsọ nke ntọala nke Jenesis na-eji ya ma na-eji ọmarịcha ụlọ mara mma dị egwu
2. Gıda Blog Okwu
Ngosi & nkọwa / ụnụ: 125 $
WordPress ve WordPress için bir blog. -Na-abịa na ndekwaa ụzọ esi eme nri ma na-enyekwa gị ohere ịnabata ntinye nri sitere n’aka ndị na-agụ gị. Daha fazla bilgi Cook cook – ngwa mgbakwunye $ 39. Daha fazla bilgi ya da daha fazla ayrıntı görüntüleme. n’aka na ha agaghị echefu ma ọ bụ ihe ọ bụla dị mkpa.
Mana – Agbanyeghị etu esi echepụta isiokwu nike vardı ịbụ maka akwu, ọ gaghị ekwe omume itinye ụrụ niile onye nwe weebụsaịtị nwere ike ịchọ.
Dịka ọmụmaatụ, maka blọgụ nri gị, ike nwere ike ịchọpụta na ịchọrọ ụzọ kachasị mma ma kachasị mma iji gosipụta nri gị, ma ọ bụ na ịchọrọ ime ka nri foto post gị dịịị. İorụ dị ka ndị a apụtaghị na isiokwu ahụ.
Iji nweta ụrụ dị otú ahụ, wkwesịrị ịwụnye eklentileri.
WordPress nri blog eklentileri ve blogları eklentisi:
Ntụziaka sitere na Simmer telaffuz Telaffuz eden: ikwuputa Ezi ntụziaka na blọọgụ gị. -Na-enye ntọala dị mfe iji depụta ihe ndị dị na ya, nye ntuziaka esi nri na ozi ndị ọzọ. Daha fazla bilgi Arama kriterlerinize uygun Google iji wuo SEOlọ ọrọ enyi SEO.
Hindiba Ntụziaka Efrata
Esi nri bụ a adịchaghị WordPress bir drag-na-dobe uzommeputa onye na-ewu ụlọ. Ọ na-abakwa na nhazi 10 gün önce.
Na Ejicha ya, onye ọ bụla n’ime ndị na-agụ gị na-enweta akwụkwọ profaịlụ. Nri ya na-abịa juputara na oge, nnukwu ihe nyocha na ihe oriri na-edozi ihe gbasara Ezi ntụziaka / nri. Maka at niile ọ na-enye, ngwa mgbakwunye bụ zuru ezu zuru ezu na $ 39.
Na mgbakwunye na plugins ndị a, eklentileri kullanmak ole na ole m na-akwado saịtị ọ bụla inwe. Ihe ndị a akọwapụtaghị akọwapụtaghị aha ọ bụla dị ka nke a, ma tinye uru na saịtị ọ bụla ejiri ha. Lelee ndepụta zuru ezu ebe a.
Ọ dị mma – yabụ nke na-elekọta lojistik. ‘Ve nwere ngalaba, nnabata, na isiokwu… yana ụfọdụ eklentileri nhọrọ.
N’oge a, ị dịla njikere ịmalite ịrụ ọrụ na blọgụ gị wee chọpụta isiokwu ị ga-ekpuchi, ugboro ole ị ga-ebipụta, nke usoro ntanetị mgbasa ozi na ị ga-anwale gabazie idi. Iji mee ka ihe dị mfe, gbalịa soro usoro ntinye 5 ahụ n’okpuru.
Usoro 5 dị mfe iji nweta blog uygulaması n’ala
Nzọụkwụ # 1: Chee atụmatụ blog / web sitesi
Chọrọ inweta nhazi blog yazarı ozugbo site na mbido n’ihi na ihe owuwu saịtị (karịchaa, isi nri ọzọ ya) ga-ekpebi etu ahụịịị igịbe ọrụ nke ndị ọrụ gị ga-esi dị.
Nke a dk mkpa maka blog nri maka ọdịnaya nke blog nwere ike ịgbatị ọtụtụ nri, nri, nri na ndị ọzọ. Yabụ, in bụrụ na inwetara nchịkọta nhọrọ nke weebụsaịtị ahụ n’aka nri, ị ga-amalite mmalite dị mma.
E wezuga ya, iche maka ihe saịtị gị ma ọ bụ naanị ime atụmatụ nchịkọta saịtị gị ga-enye gji o gi i ụ ị ị ị ga-enyocha na blọọgụ.
Lee otu ihe eni iji nye gị isi mmalite.
Kate blogger daha fazla bilgi CookieAndKate nwere ndepụta weebụ ebe zuru ezu. Naanị lelee otú e si akọwa ihe ve na-eme na otú ọfụma na-adaba adaba:
Yabụ ọ bụrụ na ị ga – enw saịtị nwere nnukwu ọdịnaya, w nwere ike makga maka menü dịka nke a.
Ukwu! Mee nke a – D 20.ka o kwesiri, tupu ịmalite blọọgụ gị, ịkwesịrị inwe ọhụụ opekata mpe nke 20., Kedu nke pụtara, ọ bụrụ na ibipụta akwụkwọ ugboro abụọ n’izu, a ga-ekpuchi gị karịa ọ.
Akụkụ akụkụ nke ọdịnaya gị ga-abịara gị. Ekele gị nka na niş. Otú ọ dị, ederede a ga-eme ka ọkara nke ọdịnaya gị
n’ihi na mgbe niile, olee otú ezigbo ezigbo uzommeputa ga-ele anya na-enweghị ụfọdụ nefis oyiyi …
O di nwute, foto abughi ihe mmadu nile. Mana nke ahụ apụtaghị na ịnweghị ike ịmụ.
Bu oyle nike achịcha a gwakọtara ma ọ bụ ihe ndị na-emepụta ihe, ihe oyiyi na-abụ akụkụ buru ibu nke otu blog nri. Nke pụtara na ị gaghị emeli için eklenen fotoğraf mediocre. Ma obi dị ụtọ, w nw a n en-nye nri nchịkọta nri na-enweghị atị ị nwere ike ịmụta site na:
Ohe osise nke ihe oriri
N’okpuru ihe nkiri: Yemek Fotoğrafçılığı (Yoğurt Parfe)
Diğer ukwuu site fotoğrafları ve videoları
Ọ b ,rụ na ịnweghị oge ịmụ ọtụtụ ihe, bbụlagodi bido sitesi daha fazla bilgi:
Tinye Otomatik Odaklama ma pịa
Gbaa mbọ hụ na enwere ezigbo ụkụ mgbe ị gbaa.
Daha fazla bilgi Canva veya Ebube azu.
Kase nke tọrọ ụtọ
Ọzọkwa, ghọta na ọ na-ewe oge iji nweta ego sitesi na blọọgụ – yabụ mee ihe niile ị na-eme ka ị na-enwe ndidi. Gha abanye ebe ahu ma oburu na inwa izu ike.
WordPress için ücretsiz bir blog yazdı. Daha fazla bilgi ego itinye ego na mmụta, lelee mmemme dịka Food Blogger Pro. Ma ọ bụ, mee ihe kachasị mma ma soro ma mụọ blọọgụ nri ndị ọzọ çiş mụta ihe na ha.
Ntuziaka Editörü – BuildThis.io e-ọzọ bipụtara isiokwu a na saịtị herhangi bir. Anyị emelitela ọdịnaya ahụ tupu anyị ebidoghachi akwụkwọ ebe a.